Ịgụ Oge: 2 nkeji Isi okwu, biputere aha, aha, isiokwu… ihe ọ bụla ịchọrọ ịkpọ ha, ha bụ ihe kachasị mkpa na ọdịnaya ọ bụla ị nyefere. Olee otú ọ dịruru mkpa? Dị ka nke a Quicksprout infographic, ebe 80% nke ndị mmadụ na-agụ a isiokwu, naanị 20% nke na-ege ntị n'ezie clicks. Mkpado aha dị oke mkpa iji nyocha njikarịcha na isi akụkọ dị mkpa iji mee ka ọdịnaya gị kesaa na mgbasa ozi. Ugbu a ị matara akụkọ dị mkpa, ị nwere ike ị na-eche ihe
Ịgụ Oge: <1 nkeji Ndị folks na ReferralCandy emeela ya ọzọ site na nnukwu nchịkọta nke ndụmọdụ inbound maka ịre ahịa ọdịnaya e-commerce na infographic. M hụrụ n'anya nke a format ha na-etinye ọnụ together ọ bụ a nnọọ jụụ ndepụta na a format na-adị mfe na-enye ohere marketers ka i scanomi ma bulie ụfọdụ oké azum yana ndụmọdụ si ụfọdụ ndị kasị mma ụlọ ọrụ ọkachamara si n'ebe. Ndị a bụ 24 Juicy Tips for Ecommerce Content Marketing from Inbound Marketing
Ịgụ Oge: <1 nkeji Ọ dị mma, aha ahụ nwere ike ịbụ ntakịrị nduhie. Mana ọ dọbara uche gị ma mee ka ị pịa site na post, ọ bụghị ya? A na-akpọ ya linkbait. Anyị abịaghị na blọọgụ blọgụ dị ọkụ dịka nke ahụ na-enweghị enyemaka… anyị jiri Generator Generator Content Generator. Ndị maara ihe na Portent ekpughelarị otu echiche maka igwe na-enye ọkụ wee bụrụ. Ọ bụ nnukwu ngwa ọrụ na - etinye aka na usoro njikọ ndị na-